I-salicylic acid yeziphumo ebezingalindelekanga
Isebenza kwi-salicylic acid ye-topical: i-bandage ye-topical, i-cream cream, i-foam ye-topical, i-gel / jelly, i-liquid, i-topical lotion, i-ointment ye-topical, i-pad ye-topical, i-topical patch ekhululiwe ukukhululwa, i-shampoo ye-topical, isepha, isisombululo
Iziphumo ebezingalindelekanga ezifuna unyango kwangoko
Kunye neziphumo zayo ezifunekayo, i-salicylic acid ye-topical inokubangela ezinye iziphumo ezingafunekiyo. Nangona ingezizo zonke iziphumo ebezingalindelekanga ezinokwenzeka, ukuba ziyenzeka zisenokufuna unyango.
Jonga ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba ngaba kuye kwakho naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga xa uthatha i-salicylic acid topical:
Okungaqhelekanga okanye okungaqhelekanga
Ukucaphuka kolusu akukho phambi kokusetyenziswa kweli yeza (ngokuphakathi okanye ngokuqatha)
ukoma nokuxobuka kolusu
urhudo okanye ukurhawuzelela
ukuba bomvu kwesikhumba
ukudumba kwamehlo, ubuso, imilebe, okanye ulwimi
ulusu olufudumele ngokungaqhelekanga
Fumana uncedo olukhawulezileyo kwangoko ukuba kukho naziphi na kwezi zinto zilandelayo xa ugqithisa xa uthatha isaliclic acid.
Ngaba i-gpi a5 sisiyobisi
ukukhawuleza okanye ukuphefumla nzulu
Intloko (enzima okanye eqhubekayo)
ukukhala okanye ukubhuza ezindlebeni (ukuqhubeka)
Iziphumo ebezingalindelekanga ezingafuneki ngonyango kwangoko
Ezinye iziphumo ebezingalindelekanga ze-salicylic acid ezingaphezulu zinokwenzeka rhoqo awudingi ngonyango . Ezi ziphumo bezingalindelekanga zinokuhamba ngexesha lonyango njengoko umzimba wakho uhlengahlengisa iyeza. Kwakhona, umsebenzi wakho wezempilo unokukwazi ukukuxelela malunga neendlela zokuthintela okanye ukunciphisa ezinye zeziphumo ebezingalindelekanga.
Jonga ngononophelo lwempilo ukuba kukho naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga qhubeka okanye uyaphazamisa okanye ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nayo:
Ukucaphuka kolusu akukho phambi kokusetyenziswa kweli yeza (kubumnene)
Ezinye iziphumo ebezingalindelekanga azinakuxelwa. Unokuzixela kwi I-FDA .
Ungazithenga njani iincwadi kuhlobo
iziphumo ebezingalindelekanga zeempawu ze-estradiol
isetyenziselwa ntoni omeprazole
ummandla we-anatomical womzimba
Itoynol yentsana yentsana kangaphi
idosi ephezulu yeativan